Buckwheat အစားအစာ - Keto Eat&Fit
ဆေးဝါးတွင်ပင်လူကြိုက်များသောဂျုံဂျုံဓာတ်သည်လူတိုင်း၏ဘ ၀ ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ကောင်းမွန်သောရလဒ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရန်စွမ်းအားငယ်တစ်ခုအား ၁၀ ရက်ကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားရန်လုံလောက်သည်။ထို့အပြင်သာယာဝပြောမှု၏အလုံးစုံတိုးတက်မှုနောက်ခံအားဖြင့်သိသာသောစွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။
သံသယရှိနေပါသလား။ဒါမှမဟုတ် buckwheat ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားလိုတဲ့ဆန္ဒရှိလား။အကောင်းဆုံးအဖြေမှာသင်၏အစားအစာကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာကပ်ထားရန်ဖြစ်သည်။
ထိရောက်သော buckwheat diet: အသေးစိတ် menu ကို
အစားအသောက်အဟာရအတွက် buckwheat လုပ်ခြင်းအတွက်အခြေခံချက်ပြုတ်နည်းများ -
Buckwheat ကိုတိုင်းတာပြီးအကြိမ်ကြိမ်ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောရေနှင့်ဆေးကြောသည်။အဆီပြန်သောရုပ်ရှင်သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရေပေါ်ကိုရပ်တန့်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်သီးနှံများပြင်ဆင်ရန်နောက်အဆင့်သို့သွားနိုင်သည်။ပထမ ဦး စွာ buckwheat အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့ပြီး (အဆီ, ဆားနှင့်အခြားအရာမပါဘဲ) ခြောက်သွေ့တဲ့ဒယ်အိုးထဲမှာအညိုရောင်။ထို့နောက်သီးနှံများကိုပြီနောက်ဟင်းဆီသို့သုတ်လိမ်းပြီးရေပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ (၁. ၅ ခွက်ရေတစ်ခွက်ကို buckwheat တစ်ခွက်တွင်ထည့်ပြီး) အဖုံးဖြင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖုံးအုပ်ထားသည်။အပေါ်မှအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကုန်သေတ္တာကိုမျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့်ဂရုတစိုက်ထုပ်ပြီးတစ်ညတည်းထားရှိသည်။နံနက်အချိန်၌ဂျုံဂျုံသည်ကောင်းစွာအသုံး ၀ င်ပြီး၎င်း၏အသုံးဝင်သောအရာအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
သန့်ရှင်းသောဂျုံမှုန့်ကိုဟင်းရည်အိုးထဲသို့လောင်းကာရေထည့်ပါ (၁း၂) ။တစ်ဆူပွက်စေခြင်းငှါငါနှင့်ချက်ချင်းပိတ်ထား။အဖုံးဖြင့်ပိတ်ပြီးသုံးနာရီအထိမျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုခြုံပါ။အလားတူစာရွက်မျိုးသည်ဂျုံဂျုံ၏အရသာကိုသဘောမကျသူများနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရှိအာဟာရဓာတ်များအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှထိန်းသိမ်းလိုသူများအတွက်သင့်လျော်သည်။
နှစ်ပတ်ကြာမှဂျုံနှင့်ဂေါ်ပြားကိုသာစားသုံးပါကအများဆုံးရလဒ်ကိုရရှိလိမ့်မည်။သို့သော်အမျိုးမျိုးသောအကြံပြုချက်များအရတစ်ပတ်မှနှစ်လအထိနှစ်စဉ်အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝသောအာဟာရဓာတ်များကိုရရှိသည်။ဒါဟာနံနက်စာအတွက်သာမှန်ကန်စွာချက်ပြုတ်ထားသောဂျုံယာဂုကိုစားရန်ခွင့်ပြုထားပြီးတစ်နေ့တာအတွက်ပုံမှန် menu မှလိုက်ဖက်သည်။ဤကိစ္စတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္inာန်ပုံသဏ္inာန်ကိုမြင်နိုင်သောရလဒ်သည်တစ်လအတွင်းဤအစာအာဟာရကိုတွေ့ရှိရပေမည်။
သန့်ရှင်းသောရေသည်သစ္စာရှိသောအဖော်တစ် ဦး ဖြစ်သင့်သည်။ကရာဖ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးနှစ်ရှည်ဖြစ်သောဂျုံစေ့ကိုစားသုံးခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိလုံလောက်သောအရည်ပမာဏကိုဖြည့်ဆည်းရန်တစ်နေ့လျှင်ရေသန့် ၁. ၅-၂ လီတာကိုသောက်ရန်လိုအပ်သည်။သာမန်စင်ကြယ်သောရေကိုတွင်းထွက်ရေဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးခွင့်ပြုသည်။ထို့အပြင်အစာအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအစားအသောက်များကိုသယ်ဆောင်သည်၊ အိမ်သာကိုမကြာခဏလည်ပတ်ရန်လိုအပ်လာလျှင်အလုပ်တွင်အာရုံမပျံ့လွင့်ပါ။
အမြဲတမ်းလတ်ဆတ်သောအစားအစာ။buckwheat ဂျုံယာဂုကိုအပိုသိုလှောင်ရန်မလိုဘဲ၊ နောက်အပတ်အတွက်ချက်ပြုတ်သည်။အလားတူကေဖီဝယ်ယူမှုနှင့်ပြင်ဆင်မှုအတွက်လည်းအကျုံးဝင်သည်။ဤသည်ကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အစားအစာ၏သင့်လျော်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
buckwheat ဂျုံယာဂုကိုမစားမီမိနစ် ၃၀ တွင်ကေဖီသောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။ဤသည်အတိုင်းအတာအစားအစာအကောင်းဆုံးစုပ်ယူဘို့အစာခြေစနစ်ကပြင်ဆင်။သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်း၏အရသာကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ဂျုံယာဂုတွင်အနည်းငယ်သောကဖေးထည့်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးမုန့်ညက်သည်အိပ်ရာမဝင်မီ ၃ နာရီခန့်တွင်ဖြစ်သည်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြည့်အဝစားနိုင်သောအစာကြေစေရန်၊ ထို့နောက်အခြားအလုပ်များသို့ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။အကယ်၍ ဤအချိန်ကာလအတွင်း၌ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုခံစားရပါကရေသို့မဟုတ်ကဖေးတစ်ခွက်သောက်ခွင့်ပြုသည်။
အစားအစာကိုမှန်ကန်စွာစီမံပါ။သငျသညျတင်းကျပ်စွာအစားအစာ option ကိုလိုက်နာလျှင်, သင်သာ buckwheat, kefir နှင့်ရေကိုစားသင့်ပါတယ်။ဂျုံယာဂု၏အရသာကိုတိုးတက်စေရန်ဆား၊ သကြားနှင့်ဆီတို့ကိုမသုံးပါနှင့်။ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သစ်ကြံပိုးကိုတစ်ခါတစ်ရံ kefir တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။တစ်ခါတစ်ရံပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွက်သူတို့သည်သကြားမပါဘဲလက်ဖက်ရည်ကြမ်းအားနည်းနေသည်။အစားအစာကိုဂျုံယာဂု ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ဂရမ်အတွက် ၃-၄ အစာစားသည်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအပေါ်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုKefir နှင့် buckwheat တွင်ပါဝင်သောအစားအစာသည်ကိုယ်ခန္ဓာအားကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံ၊ ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်ပရိုတင်းများနှင့်ပြည့်စေသည်။ယင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်လာသည်၊ သွေးကြောများပိုမိုအားကောင်းလာပြီးသွေးကိုပိုမိုများပြားလာစေသည်။
Cellulite လျှော့ချရေးခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြည့်အဝသန့်စင်ပေးပြီးအရေပြား၏အသွင်အပြင်ကိုချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။မှန်ကန်သောအသည်းလုပ်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်လာစေသည်။အဆိပ်အတောက်များကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ရှားပေးပြီး၊ အရေပြားအောက်ရှိအလွှာများရှိအဆီပိုလျှံများလျော့နည်းသွားသည်။
သုံးစွဲမှုလွယ်ကူခြင်းရှုပ်ထွေးမှုကိုသင်ဘာကြောင့်မပါဘဲလုပ်နိုင်သနည်း။သင်၏ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုတွက်ချက်ရန်၊ ဂရမ်စီတိုင်းကိုတိုင်းတာရန်သို့မဟုတ်အချို့သောအစားအစာများပေါင်းစပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်မလိုအပ်ပါ။သင်သည်တစ်နေ့လုံးကြိုက်သလောက်စားနိုင်သည့်ဂျုံဂျုံစားနိုင်သော်လည်းအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်မှာမည်သည့်နေရာတွင်မျှမသွားနိုင်ပါ။
မြင့်မားသောထိရောက်မှုအကြံပြုချက်များကိုအပြည့်အဝလိုက်နာပြီးလျှင် ၁၀ ရက်အတွင်း ၁၀ ကီလိုဂရမ်ခန့်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။အခြားအစားအစာများနှင့်မတူဘဲဤနံပါတ်များနှင့်အတူကျန်းမာရေးကိုလည်းပမာဏအတိုင်းအတာဖြင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အာဟာရဓာတ် - တစ်နေ့တာစာရွက်
နံနက်စာအဆီ - အခမဲ့အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ ၁၀၀ ဂရမ်နှင့်ဂျုံဂျုံယာဂုကိုတစ်ပန်းကန်ထဲတွင်ရောစပ်သည်။kefir သို့မဟုတ်အချဉ်ဖောက်ထားသောနို့တစ်ခွက်ကိုသောက်ခွင့်ပြုပြီးနောက်နာရီဝက်မတိုင်မီသို့မဟုတ်နာရီဝက်အကြာတွင်။
နေ့လည်စာ။ဂျုံ (၁၅၀ ဂရမ်) ပြုတ်ထားသောအမဲသား (၁၀၀ ဂရမ်အထိ) နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ် (၁၀၀-၁၅၀ ဂရမ်) နှင့်အတူ။သံပုရာရည်အဖြစ်သံပုရာရည်နှင့်သံလွင်ဆီအနည်းငယ်တို့ကိုသုတ်ဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်သည် (သို့သော်၎င်းမပါဘဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်) ။
ညစာစားဂျုံယာဂု (၁၀၀ ဂရမ်ခန့်) နှင့် kefir တစ်ခွက် (200-250 g) ။